Kintana WWE 5 amin'izao fotoana izao izay mirehareha amin'ny maha LGBTQ azy - Wwe
Kintana WWE 5 amin'izao fotoana izao izay mirehareha amin'ny maha LGBTQ azy
Betsaka ny fijerin'ny besinimaro an'ireo mpivady ao amin'ny WWE tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, kanefa na dia mitombo amin'ny taha mahavariana aza ny Superstars mahita ny fitiavana ao amin'ny orinasa dia mendrika marihina ihany koa ny fahasamihafana ao amin'ny orinasa.
Nandritra ny taona maromaro, dia nazava fa i Darren Young no hany kintana WWE homosexuelus miharihary ary ny orinasa dia tsy afaka nanao an'io ampahany amin'ny tantara io raha izy dia tao anatin'ny orinasa.
Pat Patterson dia kintana WWE iray hafa izay reharehan'ny zava-misy fa anisan'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ izy ary nisokatra tamin'ny resaka firaisana ara-nofo ho an'ny ankamaroan'ny asany. Nandritra ny taona maro dia niova ny fiainana ivelan'ny peratra ary izao dia mahafinaritra ny mahita fa mandray ny fiovana ao amin'ny orinasan'izy ireo koa ny WWE. Ireto misy Superstar dimy hafa izay mpiavonavona sy mpikambana misokatra amin'ny spektrum LGBTQ.
# 5. Sonya Deville
Sonya Deville dia noheverina ho mpiady vehivavy pelaka miharihary voalohany tany WWE. Ilay kintana MMA teo aloha dia tsy nanambara mihitsy fa zavatra hafa izy ary efa nazava tsara momba ny firaisana ara-nofo.
Deville koa dia teo am-pelatanan'ny mpilalao Total Divas izay nahafahany nanana float manokana tao Pride Fort Lauderdale. Deville koa dia afaka nampiditra ny WWE Universe tamin'ilay sakaizany, Arianna.
Nandritra ny asany, Deville dia nametraka tantaram-pananahana vehivavy miaraka amin'i Mandy Rose ary nisy fotoana naneken'ny WWE ny tantaram-panambadiana talohan'ny nanesorana azy tamin'ny minitra farany.
Rose sy Deville dia mpinamana be indrindra nandritra ny androm-piainany tany WWE ary te-ho afaka hamoaka tantara iray misy dikany. Hatreto i Deville dia tsy mbola afaka niditra tao amin'ny laharam-pamantarana LGBTQ fa ny kintana NXT teo aloha dia nanery azy io ho tonga zava-misy atsy ho atsy.
rehefa very olona tianao ny tononkalo
maninona no mitsoaka ny lehilahy rehefa raiki-pitia
brock lesnar lanja sy haavony
inona no ilaina eto amin'izao tontolo izao